Rio de Janeiro oo loo doortay inay martigeliso Olombikada sanadka 2016ka. | Where Education Talks
Rio de Janeiro oo loo doortay inay martigeliso Olombikada sanadka 2016ka.	October 3, 2009
Filed under: Uncategorized — aqoonkaab @ 12:58 pm Dabaaldegga reer BrazilMagaalada Rio de Janeiro ayaa gudiga Olombikada ee caalamiga ahi u doorteen inay marti geliso ciyaaraha xagaaga ee 2016 la qabanayo kadib markii magaalada Chicago ee dalka Maraykanka oo tartanka ku jirtay si lama filaana loogu reebay wareegii koowaad ee tartanka.
Magaaladan Brazil ka tirsan waxay ka guulaysatay magaalada Madrid ee dalka Spain oo ay wareegii saddexaad ahna kii go’aan qaadashada kusoo baxday codadkii Gudida olombikada Caalamiga ah ee ka dhacay magaalada Copenhagen jimcihii manta, tan oo noqotay markii u horaysay ee taarikhda Ciyaaraha Olombikada ee dal ka tirsan Koonfur Amerika loo doorto inay ciyaarahaas martigeliso.
Dadweynaha Brazil ayaa farxad la oogsaday markii ay maqleen warkan xiisaha badan iyaga oo go’aanka gudida toos ugala socday telefishanada waxayna sheegeen iyaga oo farxadi buux dhaafisay in ay tani tahay riyadoodii oo rumowdey.
Go’aankan gudidu waa mid sax ah, mar hadii la rabo in Olombikadu noqoto mid caalami ah waa in kolba meel lagu qabto, sidoo kalena go’aanku waa mid la yaab ah waayo magaalada Rio de Janeiro waa magaalo mushkilado badani ka taagan yihiin iyada oo denbiyadu ku badan yihiin, sidoo kalena malaha kaabayaal ama waxyaalo badan oo aasaasi ah.Sidaa waxa qaba John Anderson oo ah weriye ciyaaraha ka warama.
Chicago oo la filayay inay noqoto tan hanan doonta codadka cida marti galinaysa ciyaaraha Olombikada ee sanada 2016ka, uuna ololaheeda waday madaxweynaha Maraykanku Obama oo magaalada Copenhagen ku sugnaa ayaa wareegii koowaad ku hadhay halka magaalada Tokyo ee dalka Japan oo iyana tartanka ku jirtay ay wareegii labaad ku hadhay. Arrintan ayaa niyad jab ku keentay qaar taageerayaashii Maraykanka ahaa iyo madaxweyne Obama laftiisa oo taageerada magaaladiisa u tagay dalka Denmark si uu ula soo guryo noqdo guul ah in Chicago loogu doorto magalaada 2016ka martigelinaysa Olombikada, hase yeeshee shacabka Maraykanku waa ku kala tagsanaayeen in Obama halkaas tago waqti ay ahayd inuu ku sugnaado magaalda Washington oo ay arimo badani uga yaaleen oo dhanka siyaasada iyo caafimaadka khuseeya.